Mpanao diaben’ny fandriampahalemana avy ao Helmand mikasa hamadika ny pejin’ny tantaran’i Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Mpanao diaben'ny fandriampahalemana avy ao Helmand mikasa hamadika ny pejin'ny tantaran'i Afghanistan
Voadika ny 23 Jona 2018 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, ਪੰਜਾਬੀ, Ελληνικά, Français, Swahili, Español, English
Sarin'ny diaben'ny fandriampahalemana nalaina tao amin'ny tranonkalam-baovao Etilaatroz ary nahazoana alalana. Photo of the peace march taken from the Etilaatroz news website and used with permission.
Sivily niharam-boina miisa 10.453 — olona 3.438 no namoy ny ainy ary 7.015 naratra — no voarakitra tamin'ny taona 2017 tao Afghanistan. Taorian'i Kabul, tanàna renivohitra, ny mponina tao amin'ny faritany atsimo ao Helmand no tena voa mafy.
Milaza ny tantaran'ny faharerahana tamin'ny ady ny hetsika #HelmandPeaceMarch izay tarihan'ny tanora avy ao amin'ny faritany ary manasongadina ny fitadiavan'ny taranaka ho avy fiainana tsara kokoa ao amin'ny firenena potiky ny herisetra.
Tonga tany Kabul ankehitriny ny diabe, rehefa avy nandeha an-tongotra 700 kilometatra manavatsava ireo faritany efatra tsy azo antoka indrindra ao Afghanistan –Helmand, Zabul, Ghazni ary Maidan Wardak. Teny an-dalana, nanao fivoriana niaraka tamin'ireo mponina ny mpanao diabe ary nanazava ny tanjon'ny diaben'izy ireo. Nanomboka olona 7 izy ireo tany am-boalohany saingy nahazo olona 59 hafa nandritra ny dian'izy ireo.
Tonga tao Kandahar ny valalamanjohin'ny mpanao diaben'ny fandriampahalemana. Niala tao Helmand hankany Kabul izy ireo mba hitady fandriampahalemana sy filaminana ho an'ny tanindrazany. Tokony deraina sy raisina ireo malalantsika ireo. Mahafinaritra ny fahavononan'izy ireo, ny fahatsorana sy ny asa mafy nataon'izy ireo. Manantena aho fa ho re ny feon'izy ireo ary hahazo ny valiny iriana.
Loka stratejika ho an'ny governemanta sy ny Taliban i Helmand. Matetika heverina fa nahazo fikarakarana manokana niaraka tamin'ireo mpikomy, izay mifehy faritany maro kokoa ao noho ny governemanta ny mponin'i Helmand ao an-toerana.
Mikasa hanohitra izany fitsarana an-tendrony izany ny diabe.
Nitombo noho ny daroka baomba nataon'ny Taliban tao Helmand tamin'ny volana Martsa izay nahafatesana olona 15 sy naharatrana marobe ity hetsika fandriampahalemana natomboka tany ambanivohitra ity.
Voalohany, trano lay fanaovana sit-in maromaro no nipoitra tao Helmand sy ny faritany hafa: Herat, Nimruz, Farah, Zaboul, Kandahar, Uruzgan, Ghazni, Paktia, Kunduz, Kunar, Nangrahar, Balkh, Parwan, Daykundi, Maïdan Wardak, Bamyan et Jawzjan. Nanaraka avy eo ny fitokonana tsy hihinan-kanina.
Manana fitakiana efatra lehibe ny diabe niainga tao Helmand nankany Kabul:
Ny fanajana ny volana masin'ny Ramadan, tokony hanambara fampitsaharana ady ny andaniny sy ny ankilany rehetra (Nifarana tamin'ny herinandro lasa ny Ramadany ary na dia teo aza ny fiatoan'ny ady vetivety, namerina fanafihana mikendry ny governemanta ny Taliban);
Tokony ho hita eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ao anatin'ny ady ny fantsona manokana sy adiresin'ny [fitadiavana] fandriampahalemana, ary tokony hatomboka ny fifampiraharahana ho amin'ny fandriampahalemana;
Raha jerena ny soatoavim-pirenena sy Islamika, tokony efa noraisina ny dingana mivaingana amin'ny fananganana rafitra eken'ny andaniny sy ankilany
Mifototra amin'ny fifanarahana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany rehetra amin'ity ady ity, tokony hapetraka ny fandaharam-potoana mazava mba hanesorana ny tafika iraisam-pirenena hiala an'i Afganistana.
Noraisin'ny vahoaka tamim-pihobiana ireo mpanao diabe teny an-dalana ho any Kabul. Ny sasany aza namaly tamin'ny alalan'ny voninkazo sy hira ho an'ny fandriampahalemana mihitsy.
Vao avy tonga ao amin'ny distrikan'i Shajoi ny karavanan'ny #fandriampahalemana avy ao amin'ny faritany#Helmand & hanohy ny dia ho any #kabul renivohitra izy ireo. Nikarakara “fihetsiketsehana am-pandehanana” izy ireo & mitaky ny fampitsaharana ady avy hatrany eo amin'ny governemanta #Afghan sy Taliban.#LongMarch2Kabul
Naelin'ireo lehilahy, vehivavy, tovovavy, tovolahy avy amin'ny foko rehetra tao amin'ny media sosialy ny tenirohy #Helmand2Kabul sy ny #HelmandPeaceMarch.
Mitsangana milahatra handray ireo tovolahy #Pashtun avy ao amin'ny faritany #Helmand, izay nanao dia an-tongotra efa ho 600 kilaometatra mitaky fandriampahalemana ny tovovavy#Hazara ao amin'ny faritany #Ghazni. Ny hafatra mafonja dia “tsy mankatoa fisiam-poko ny #ady & herisetra” ary Lasibatry ny#herisetra ao #Afghanistan avokoa ny rehetra.
Miandry hampiantrano ny #HelmandPeaceMarch i #Kabul- Mandoko andiana hosodoko an-drindrina ao amin'ny lalambe mankany Kabul i @ArtLordsWorld mba handray ireo #Maherifonnyfandriampahalemanal
Ao Kabul ankehitriny ny Diaben'ny Fandriampahalemana Helmand. Nankany amin'izy ireo izaho sy i Neny. Eo anoloan'ny Moskea sy ny Madrassa manoloana ny Sekolin'i Habibia izy ireo. Fotoam-pifaliana sy fanasitranana ho ahy sy ineny ny nahita azy ireo. Andeha handray azy ireo ao Kabul miaraka amin'ny hafanana sy ny fanohanana.
Ny 19 Jona, nihaona tamin'ny filoha Ashraf Ghani ireo ireo mpanao diabe, tsy tao amin'ny lapam-panjakana raitra ao Kabul araka ny tolo-kevitry ny manampahefana tany am-boalohany, fa teny an-dalambe, izay nanombohan-dry zareo hetsika. Tsy mety mihaona amin'izy ireo amin'ny fomba ofisialy hatramin'izao ny Taliban, na dia efa nihaona sy niresaka tamin'ireo mpiady avy ao amin'ny vondrona teny an-dalana aza izy ireo.